News Mansarovar » नारीलाई ‘नछुने’ बनाउने प्राधिकार कि पाखण्ड? नारीलाई ‘नछुने’ बनाउने प्राधिकार कि पाखण्ड? – News Mansarovar
पुंकेशरबाट सेचन नगरेका कारण निर्धारित काल पार गरी त्यस्तो रज निःसृत हुनुलाई संस्कृत वाङ्मयमा रजस्वला भनिएको पाइन्छ। रजको अर्थ चमक वा ज्योति पनि हो जसलाई ऋतु भनिन्छ।यसै कारणले रजस्वलाको समयलाई ऋतुकाल पनि भनिन्छ। ऋतु शब्दको मूल ऋतम् हो जसको अर्थ निश्चित प्राकृतिक नियम भन्ने हुन्छ। त्यस्तो प्राकृतिक नियम वा गुणलाई धर्म भनिन्छ। यसैले रजस्वलालाई मासिक धर्म भनिएको हो।